Arsenal oo weli guul kaga gaari la’ United Old Trafford kaddib Markii….+SAWIRRO - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
December 5, 2018 at 23:10 Arsenal oo weli guul kaga gaari la’ United Old Trafford kaddib Markii….+SAWIRRO2018-12-05T23:10:33+00:00 CAYAARAHA
( Premier League ) 05 Dis 2018. Kooxda Arsenal ayaa u muuqan kartay mid guul kaga gaarta United garoonkooda markii u horreysay mudda 10-sano ka badan markii cayaartooda ay ku dhammaatay 2-2.
Dheesha ayaa qeybta hore lagu kala maray 1-1, waxaana hogaanka cayaarta qabatay Arsenal kaddib goolka madax ah uu u dhaliyay Shkodran Mustafi taasoo dhaafay diilinta goolka ka hor inta uusan soo saarin Ander Herrera taasoo uu qaladkeeda lee yahay goolhayaha kooxda David De Gea waxaana lagu xaqiijiyay alaada goal line technology.
Laakiin daqiiqo badan kuma qaadan United iney la yimaadaan goolka bar-baraha waxaana u dhaliyay Anthony Martial kaddib caawin uu ka helay Herrera.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyahada dambe labada dhinac ayaa muujiyay cayaar aad kaga wanaagsaneed qeybtii hore.
Arsenal ayaa markale hogaanka cayaarta qabatay markii kubbad kama’ ah uu iska dhaliyay Rojo taasoo uu sababteeda lahaa Alexandre Lacazette.
Balse waxa kama soo wareegin markii Man United ay horeba ka barbareysay goolka labaad ee laga dhaliyay waxaana u bareejeeyay Jesse Lingard daqiiqadii 68-aad.
Dhammaadkii kulanka Gunners ayaa cadaadis xoogan saartay goolka Manchester iyadoo De Gea uu fursado halisa ka badbaadiyay Aubameyang iyo Torreira.
Natiijadaan ayay Arsenal kaga dhigan tahay iney guul ku gaari la’dahay Old Trafford mudda ka badan 10-sano tan iyo 1-0 oo ay kaga badiyeen sanadkii 2006-dii, waxayna Arsenal yihiin guuldarro la’aan 20-kulan dhammaan tartamada.
« Cheslea oo guuldarro kala kulantay Wolves…iyo Liverpool oo Guul soo laabasho ah ka gaartay Burnley.
Premier League Round Up: Liverpool Oo Si Fudud Ku Dhaaftay Burnley, Wolves Oo Ka Tallaabsatay Chelsea, Man United Iyo Arsenal Oo Ismari Waayay Iyo Dhammaan Natiijooyinkii Kulamadi Xalay Laga Ciyaaray EPl. »